I-China F800-9 * 60w ugongolo kanye ne-wash bar yokuhambisa ukukhanyisa ngolawulo lwe-pixel Ukwakha nefektri | Ngale
Ugongolo lwe-F800-9 * 60w kanye ne-bar yokuhambisa ukukhanyisa ngokulawula kwe-pixel
9 * 60w ugongolo kanye ne-bar yokuhambisa ukukhanyisa ngokulawula kwe-pixel uhlobo olusha lobuchwepheshe bokukhanya okukhanyayo nokukhanyisa ibha okungahamba, okwakhiwe ngokukhanya okuphezulu nobuchwepheshe obusha be-optical. Inamakhono wamamephu wamaphikseli futhi ivuselelwa ngobuchwepheshe bendawo yokukhanyisa eyindilinga, ingahlanganisa ngobubanzi bokukhanya okuhambisana nomphumela wokugeza. Blade ugongolo umphumela nge 3.5 ° ewumngcingo ugongolo engela, 40 ° ububanzi engela ukudala ukugeza kwesihenqo umphumela. Imodi yokutsheka ene-270 °, ikhanda lesigxobo lingaswayipha kwesobunxele noma kwesokudla ngaphakathi kwebanga le-35 °, lenze lezi zindawo zokukhanyisa zibe nomphumela ocebile onamandla esiteji. Akunandaba ukusebenza njengokukhanyisa kwe-WASH kochwepheshe, okusetshenziselwa ukwakheka kwesiteji, noma ukusebenza njengokukhanyisa komphumela, kungasebenza kahle kubo bonke.
9 * 60w ugongolo kanye ne-bar yokuhambisa ukukhanyisa ngokulawula kwe-pixel
Lo ngumzamo omusha wokwenza umkhiqizo onamandla aphakeme kangaka ube ukukhanya okuqondile okungazungeza kubheke phezulu. Ayiphathi kahle kuphela ukushabalalisa ukushisa, kepha futhi iphatha ibhalansi ye-counterweight yekhanda kahle. Ugongolo oluqine kakhulu noma ngabe ukukhanya kukhokhelwe konke, futhi umphumela wokugeza uphelele. Le modeli ivuselele inkinga yokuthi ilensi yeheksagoni ayikwazi ukudala indawo yokukhanyisa eyindilinga, ngakho-ke noma ngabe isendaweni yesehlakalo, ingasebenza kahle njengezibani zokuwasha eziqeqeshiwe.
Nyakazisa ifakwe 3 isigaba sinyathelo motor hambisa uhla 270 °, ukubeka ngokunemba futhi uhambe kahle. Inhloko yesigxobo ingagxumela phambili kwesobunxele noma kwesokudla kungakapheli ama-35 °. Umsebenzi ocacile wombala nephethini weMarco, usethe kabusha uhlobo lwe-46 lomsebenzi wombala we-Marco nezinhlobo ezingama-38 ezisethwe ngaphambilini zomsebenzi wephethini iMarco. Ukufiphala kwesizinda okugcwele, ukufiphala kweleveli engu-65536. Izingwegwe zokugoqa zifakwe, kalula ukufakwa.
Umthombo wokukhanya 9 * 60W RGBW 4in1 Led Khombisa: Ukuboniswa kombala we-1.8 intshi TFT nge-180 ° ebuyiselwayo
I-engeli yokusondeza 3.5 ° - 40 ° Isokhethi ledatha ngaphakathi / ngaphandle: amasokhethi ama-3-pin XLR
Ukusetshenziswa kwamandla 650W Isilinganiso Sokuvikelwa: IP20
Ukulawula Pan / Nyakazisa
Izindlela Zokulawula DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Umculo / RDM Nyakazisa i-270 °, ukunemba kwe-0.86 ° / isinyathelo, ukunemba kokuhleleka kahle: 0.0034 °
Imodi ye-DMX 20/25/61 CH Kusetshenziswa isistimu yokusetha kabusha enamandla kazibuthe
Imodi engu-4 efiphele ngokubambezeleka noma ngokungalibazisi, i-Flicker mahhala Ubukhulu: 996 × 150 × 291mm
I-strobe esheshayo 1 ~ 25Hz Isisindo Esilungile: 19 kgs
Ukulawulwa kwamaphikseli we-LED Iphakethe elijwayelekile: ibhokisi; Ikesi lendiza ngokuzithandela
Geza & ugongolo umphumela ushintshe ngokukhululekile Isitifiketi
Inhloko yesigxobo ihamba ngebanga le-35 ° ukusuka kwesobunxele kuye kwesokudla I-CE ne-RoHS
Q: Kuthiwani ngezimo zokupakisha zemikhiqizo yakho?
Re: Iphakethe elijwayelekile ibhokisi lokuthekelisa (sebenzisa i-EPE igcwele kahle amalambu) no-5 ungqimba amakhadibhodi ibhokisi
Q: Yimiphi imigomo yezokuthutha etholakalayo?
Re: Ukuhleleka okuncane kuvame ukuthunyelwa yi-Express (DHL, UPS, FedEx, TNT, njll), Ngomoya, Ngolwandle noma Ngesitimela.
Sizokunikeza isisombululo esihle kakhulu ngokuya nge-oda lakho nokuphuthuma kokuthola izimpahla.
Q: Kuzoze kube nini isikhathi sakho sokulethwa?
Langaphambilini Isiteji se-Z68-splicing ukukhanyisa ukusondeza kwangaphandle ngamaphikseli umphumela wokukhanyisa
Olandelayo: Ukukhanya kwesiteji sakamuva okungu-M52 okunamandla angama-24 * 60W Led bee eye okuhambisa ikhanda ukukhanya